किन बिग्रन्छ आवाज ?
डा. तोरण केसी | २०७६ बैशाख २ सोमबार | Monday, April 15, 2019 १६:२५:०० मा प्रकाशित
नेपालमा केटा भएर केटी जस्तो र केटी भएर केटा जस्तो बोली हुने धेरै छन्। यस्तो समस्या भएका केटा केटी दुवैको उपचार सम्भव छ। चिकित्सकीय भाषामा केटाको आवाज केटीको जस्तो हुनुलाई पिबोरफोनिया र केटीको आवाज केटाको जस्तो हुनुलाई एन्ड्रोफोनिया भनिन्छ।
मानिसहरुमा यस्तो समस्या दुई प्रमुख कारणले हुन्छ। एउटा घाँटीको स्वरबाहिनी नलीमा विभिन्न रोग, ट्युमर तथा दुर्घटनाका कारण नसा काटिने, नसामा प्यारालाइसिस हुने जस्तो समस्याले हुन्छ। अर्को भनेको उमेर बढ्दै जाँदा बच्चाबाट किशोर हुने क्रममा आवाज परिवर्तन नभएर हुन्छ। यी दुवैमा शल्यक्रिया गरेर बोली सुधार्ने काम हुन्छ।
सामान्यतया बच्चा बेलामा केटा र केटीहरुको आवाज उस्तै हुन्छ। केटीहरु बढ्दै जाँदा उनीहरुको आवाज हर्मोनको कारणले किशोर र युवती हुँदा पनि उस्तै खालको सानो र नरम हुन्छ। केटाको आवाज चाँहि १३–१४ वर्षमा विस्तारै मोटो हुँदै जान्छ। तर, स्वरनलीको वृद्धि राम्रोसँग नहुँदा, भाइरल तथा विभिन्न कारणले स्वरनली प्यारालाइसिस हुँदा उमेर बढे पनि आवाज भने परिवर्तन हुँदैन। बच्चामा जस्तै सानो र केटीको जस्तै रहिरहन्छ।
जसरी गितारको तारलाई तन्काउँदा तिखो र मसिनो स्वर आउँछ अनि तारलाई खुकुलो बनाउँदा मोटो र ठूलो स्वर आउँछ, त्यसैगरी घाँटीमा रहेको स्वर नली पनि तन्काउँदा र खुकुलो बनाउँदा सानो र मोटो आवाज आउँछ। केटीहरुमा केटाको र केटाहरुमा केटीको आवाज हुने समस्या धेरैमा रहे पनि जानकारीको अभावमा उपचारमा नआएको बताए।
यसरी स्वर मिलाउने शल्यक्रियालाई ल्यारेन्जर फ्रेमवर्क सर्जरी भनिन्छ। घाँटीमा रहेको दुईवटा स्वर नलीमध्ये कहिलेकाँही एउटा नली विभिन्न कारणले प्यारालाइसिस भएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थमा प्यारालाइसिस भएको नलीलाई इम्प्लान्ट राखेर धकेल्दै अर्को नलीसँगै लगेर जोडिन्छ र आवाजमा सुधार आउँछ।
यसका साथै विभिन्न रोग, समस्याको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा स्वर नली काटिनु, दुर्घटना जस्ता कारणले पनि मानिसको आवाजमा समस्या आउने गर्छ। तर, यी सबै समस्याको उपचार हुने र उपचार खर्च पनि निकै सस्तो रहेको छ।
यो शल्यक्रियाबाट वास्तविक समस्या भोगेर बसेका महिला तथा पुरुषसँगै लिंग परिवर्तन गरेकाहरुलाई पनि फाइदा पुग्नेछ। सामान्य शल्यक्रिया भएकाले बिरामीलाई बेहोस नबनाई पनि यो शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ।